Iyada oo boqolaal jiidashada taariikhi ah oo views weyn oo u dhaxayn qorraxda xeebaha buuraha cavernous dhunkaday, Europe si dhab ah u dhan leedahay. Waa iyadaa ugu fiican ee safarka wadada a, as it is possible to make your way from one country to another in…
Europe waa meel cajiib ah kulanka dhaqamada badan oo kala duwan - iyo caadooyinka, Kuliyadda. oo quruun waluba waxay leedahay aqoonsi oo kala duwan u gaar ah, oo barbar dhac kooxda martida ah xaq u galay taariikhda iyo wax kasta oo kale waxay bixisaa. Iyo dalal qaar ka mid ah, in sidoo kale ka dhigan cabitaanka flavorful! Kuwii…
qayb ka mid xiiso leh ah safar dibadda waa la saadaalin Karin ee waayo-aragnimo ah. Marka aad u safarto dal qalaad, aad loo soo bandhigi doonaa in dhaqamada kala duwan, goobaha, iyo waayo-aragnimada. Xitaa haddii aad sameysid xoogaa baadhis ah, waxaad hubtaa inaad kadis kuqaadi doonto qaar…